'नेप्से १३०० पुग्‍नु सामान्य हो '
अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन
नेप्से परिसूचकका बारेमा यतिबेला विभिन्न टिक्काटिप्पणी पनि सुरू हुन थालेको छ ।
परिसूचक धेरै माथि गयो भन्ने छन् । कम हो भन्ने पनि छन् । परिसूचक कम वा बढी के हो भन्दा यसका केही आधारभूत र सैद्धान्तिक पक्ष बुझ्न आवश्यक छ ।
बिमा र लघुवित्त कम्पनीका सेयर भाउ माथि जाँदा समग्र परिसूचक १३५० हारहारीमा रहेको हो । तर नेप्सेमा सूचीकृत समग्र उससमूह र कम्पनीको भाउ माथि छ त ? यसमा लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्छ ।
बिमा मै पनि केही कम्पनी ६०–७० प्रतिसेयर आम्दानी भएका कम्पनी छन् । यस्ता कम्पनी छान्न सके घाटा हुने सम्भावना छैन ।
२०६५ साउन मसान्तमा नेप्सेले फ्लोट परिसूचक र सेन्सेटिभ फ्लोट परिसूचकको गणना थाल्यो । यसबेला एक सय अंकलाई आधार मानेर यी टुल्स प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।
आज सात वर्षपछि फ्लोट परिसूचक र सेन्सेटिभ फ्लोट परिसूचक कहाँ छन् ? बजार कति बढ्यो भन्ने थाहा पाउन यसमा लगानीकर्ताले अध्ययन गर्नुपर्छ ।
सात वर्षपछि पनि फ्लोट र सेन्सेटिभ फ्लोट दुवै एक सय अंक भन्दा तल छन् । यसआधारमा बजारको वास्तविक अवस्था निकै तलै रहेको देखाउँछ ।
लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेप्सेको गणना विधि पनि गलत छ । कारोबार नभएका कम्पनीको पनि गणना हुन्छ । कतिपय प्रमोटर सेयरको कहिल्यै कारोबार हुँदैन तर ती सबैको एकमुष्टरुपमा नेप्से परिसूचकमा गणना हुन्छ ।
औसतमा बजारमा १५ प्रतिशतदेखि ४९ प्रतिशतसम्म सेयर कारोबार हुन्छ तर नेप्से गणना गर्दा पूरै कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आधारमा हुन्छ । यसले स्वतः नेप्से परिसूचक माथि गएको देखिन्छ ।
यसबाहेक कतिपय कम्पनीको प्रिमियम भ्यालूमा सेयर निष्कासन गरिएका छन् । जस्तो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र नेपाल टेलिकमको हेरौं न । इन्भेस्टमेन्टको एफपीओ ६०१ मा जारी गरिएको छ ।
लगानीकर्ताले ६०१ तिरेका छन् तर हामीकहाँ एक सय अंककै आधारमा चुक्ता मूल्यको हिसाब गरिन्छ । बजारमा फ्लोटेड रेटमा गणना गर्दामात्र बजार रियलिस्टिक हुनसक्छ । यसबाट मात्र बजारको वास्तविकता पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ ।
सेन्सेटिभ फ्लोटले क वर्गका कम्पनीको सेयर भाउ र फ्लोट बजारमा जारी भएका सम्पूर्ण सेयरको गणना गर्छ ।
सेयरमा लगानी गर्दा बजारको ट्रेन्ड कता गइरहेको छ भनेर थाहा पाउन अत्यावश्यक हुन्छ । यो सँगै मुलुकको अर्थरानीतिक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । निश्चय नै अहिलेको ट्रेन्ड बढ्दो छ । यसलाई राजनीतिक अवस्था, अर्थतन्त्र विस्तारै सुध्रिने आशाले सहयोग पु–याएको छ ।
चारपाँच वर्षको अवधिमा नेप्से चार चारपाँच सय अंक माथि जाँदैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था म देख्दिन । बैंकमा लगानीय योग्य रकम तरलता अधिक छ । निक्षेपमा दुई प्रतिशत हाराहारीमा मात्र ब्याज पाइने भएपछि बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेले पनि सेयरमा लगानी गर्न थालेका छन् ।
यहाँ त कम्तिमा पनि पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको नाफा निश्चित जस्तै छ नि । यसले पनि लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा तानिरहेको छ । सस्तोमा कर्जा पाउँदा सेयर किन्ने लागत कम हुने भयो ।
अर्को महत्पूर्ण पक्ष, सेयरमा योजनाबद्ध तरिकाले लगानी गर्नुपर्छ । आफ्नो लगानी अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन के हो त्यसमा लगानीकर्ता विश्वस्त हुनुपर्छ ।
दीर्घकालीन लगानी योजनासहित बजारमा प्रवेश गरेकाले सामान्य उतारचढावमै आत्तिएर सेयर बिक्री गर्नुहुँदैन । यसबाट नोक्सानबाहेक अरु केही हुने होइन ।
नेप्से परिसूचक १३ सय बाट माथि गयो, अब घट्छ भन्ने एकोहोरो रटानमात्रै लगाउने गरेको पनि देखिन्छ । तर २०६५ साल र अहिलेमा कति फरक छ ?
प्रविधिमा कति फड्को मारियो अनि नयाँ लगानीकर्ता कति थपिए । लगानीकर्ताको क्षमता र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्यो भन्नेतर्फ ख्याल गरिएको हुँदैन ।
अहिले डिम्याट प्रविधिबाट सेयर कारोबार हुन्छ । यसबाट कागजी प्रमाणपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिलेको छ । किनेको एक साता नबित्दै खातामा जम्मा भइहाल्छ । सेयर ऋण लिन सजिलो हुन्छ ।
नामसारीका लागि महिनौं कुर्नुपर्दैन । नगद लाभांशसहित बोनस र हकप्रद खातामा जम्मा हुने व्यवस्था हुँदैछ । यसबाट कति सजिलो भयो, भन्नुस् त ? के सधैं पुरानै र नकारात्मक कुरा गरेरमात्र हुन्छ ?
नेप्सेले कारोबार थालेकोको २२ वर्षमा १३ सय हाराहारीको परिसूचकलाई बढी भन्नुमा म चाहिँ त्यतिधेरै लजिकल मान्न सक्दिन ।
यसबाहेक नियामक सक्रिय देखिएको छ । बजार सुधारका कदम अघि बढेका छन् । नागरिक लगानी कोषलाई बजार निर्माता वा डिलरसीपका काम दिंदा निकै ठूलो फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ । बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिल्न जान्छ ।
विस्तारै विदेशी लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने, यसका लागि नेप्सेको कारोबार प्रणाली अत्याधुनिक बनाउने तयारी भएका समाचार आएका छन् । यी सबै पक्षले गर्दा नेप्से परिसूचकले अब नयाँ हाइट बनाएरै छाड्छ ।
कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्ने अवस्था छैन । साँच्चै विदेशी लगानीकर्ता आए भने के हामीले अहिलेको भाउमा वाणिज्य बैंककको सेयर किन्न पाउँला त ? तर यी सबै भनिरहँदा लगानीकर्ताले निश्चय पनि वित्तीय अवस्था निकै सबल भएका, व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त भएका कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ ।
फेरि हामीले इक्विटी सेयरमा लगानी गर्दा सेयर भाउ बढ्दा पाउने लाभसहित बोनस, नगद लाभांश तथा हकप्रदबाट पनि लाभ पाइरहेका हुन्छौं । यसबाट लगानीकर्ताको पुँजी वृद्धि भइरहेको हुन्छ ।
(अध्यक्ष रेग्मीसँग नेपाली पैसाले गरेको कुराकानीमा आधारित)